पहिलो त्रैमासमा डिप्रोक्स लघुवित्तले उठायो १ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी खराब कर्जा
कात्तिक २६, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रू. १९ करोड ८० लाख ९३ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिमा रू. ९ करोड ५८ लाख ८१ हजार थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा १०६ दशमलव ६० प्रतिशत बढी भएको हो ।
बुधवार सार्वजनिक भएको कम्पनीको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष कम्पनीले रू. १ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख ५६ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । गत वर्ष यो अवधिमा कम्पनीले रू. ४ करोड ८ लाख ७१ हजार यो कर्जा उठाएको थियो ।
खराब कर्जा संकलन बढेसँगै कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी पनि बढेको छ । गत वर्ष २३ करोड ९३ लाख ९४ हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. ३६ करोड ३५ लाख ५ हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
३० प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी बढाएर रू. १ अर्ब ५४ लाख ३३ हजार पुगेको कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. १ अर्ब ८ करोड ३७ लाख १७ हजार रहेको छ । गत वर्षभन्दा १८ प्रतिशत कम यो वर्ष कम्पनीले रू. ५ अर्ब ९८ करोड ३ लाख ११ हजार कर्जा सापटी लिएको छ ।
गत वर्षभन्दा २४ प्रतिशत बढी रू. ५ अर्ब २५ करोड ३६ लाख ८८ हजार निक्षेप संकलन गरेको कम्पनीले गत वर्षभन्दा ६ प्रतिशत बढी रू. १२ अर्ब ८४ करोड ४० लाख ८४ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा गत वर्ष १ दशमलव २५ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ७८ दशमलव ८१ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २०७ दशमलव ७९ रहेको छ ।